आलेख : मुठीमा काश्मीर::Nepal's News Portal
काश्मीरमा के छ ?
भारत प्रशासित काश्मीर आप्नो सौन्दर्यता,मौलिकता, भौगोलिक विविधता , प्राचीन मन्दिर ,महल, तालतलैया , हिउँले सेताम्म ढाकिएको हिमालदेखि मनमोहक पोखरी, लोभलाग्दो पठारको कारण प्रख्यात छ। मौलिक भाषा, संस्कृतिले सुसज्जित एकमात्र जीवित भुस्वर्ग मानिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रखर उर्दु कवि खुसेरोले लेखेका छन् :-
‘गर फिरदौस बर रुये जमिन अस्त,हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो’ अथार्थ धर्तीमा कहीँ स्वर्ग छ भने त्यो काश्मीरमा छ।
खुसरोले बयान गरेझैं कश्मीरको सुन्दर छटा र प्रकृतिको ख्याति संसारभर छ  । हिन्दु धर्म मान्नेहरूका लागि पवित्र अमरनाथको धार्मिकस्थल छातीमा राखेको जननी हो । र , प्राकृतिक आकर्षणले हरेक वर्ष डेढ करोडको हाराहारीमा भारतीय र विदेशी पर्यटक तान्ने गन्तवय हो।यसबाटै कश्मिरको अद्धितीय र अतुलनिय परिभाषा स्पष्टिन्छ । अघिल्लो सातासम्म पनि जम्मु–कश्मीर आफ्नै धुनमा रमाइरहेको थियो । पर्यटकहरूको आतिथ्य गर्न कश्मीरहरूलाई भ्याईनभ्याई थियो । सबैको प्यारो थियो , कश्मिर।
धारा ३७० अटैक ?
मोदी सरकारले एक घोषणाले गर्दा जम्मु–कश्मीर एकाएक मौन बन्न पुगेको छ । सोमबार अर्थात् ५ अगस्ट २०१९ । सोही दिन मोदी सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय मार्फत मोदी सरकारले दिल्ली र जम्मु–कश्मीरबीचको सात दशक पुरानो सम्बन्धलाई चुनौती दिए। जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खोसे। जसबाट , स्वतन्त्र देशको रुपमा उदाउने कश्मिरको सपना तहसनहस भएको छ ।
पर्यटकहरूलाई सधैं खुला हृदयले स्वागत गर्न तयार रहने भूस्वर्गको स्तब्ध छ । कश्मीर प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा छैन टेलिफोन, इन्टरनेट सबै बन्द गरिएका छन् । लाखौंको सङ्ख्यामा फौजको गस्ती हुँदैछ , पुर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई ‘प्रिभेन्टीभ डिटेन्सन’ अथार्त निवारक नजरबन्दमा राखिएको छ। कश्मीरीहरूबीच नै सम्पर्क छैन । त्यति मात्र होइन उनीहरूलाई हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । कर्फ्यु छ । कश्मीरीहरू बाहिरी दुनियाँमा उनीहरूका बारे के कस्तो चर्चा भइरहेको छ, त्यसबाट उनीहरू पूरै बेखबर छन् । कश्मिर टोलीमा मुठीमा कैद हुन पुगेको छ। बाँकी दुनियाँसँगै पूरै सम्बन्धविच्छेद गराइएको छ जम्मु–कश्मीरलाई ।
कश्मिरको केही सरकारी अडडाबाहेक अन्यमा भारतिय झन्डा फहराउदैन्थयो। तर , अब सबै चौकचौकमा तिरंगा हुनेछ। तिरंगाले कश्मिरी जनताको स्वतन्त्रताको अभिलाषालाई गिज्याइरहने छ। वैयाक्तीक स्वतन्त्रतारलाई कैद गरिरहने छ।
आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भड्किने स्थिति आयो भने त्यसको असर पूरै दक्षिण एसियामै पर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि नेपालले दुई छिमेकीबीच तनाव नबढोस् भनेर शान्ति र संयमको आग्रह गर्नुपर्छ । भारतले यस भुलको दीर्घकालिक असरबारे सोच्नुपर्ने थियो।
छिमेकी राष्ट्र पाकिस्ताबाहेक त्यहाँको वकालत गर्ने शक्ति कोही छैन। केन्द्र प्रशासीत शासन व्यवस्था गर्ने राष्ट्र भएकै कारण चीनले प्रतिक्रिया गरेको छैन। छिमेकी राष्ट्रहरु बङ्गलादेश , माल्दिभ्स, अफगानिस्तान जस्तै नेपालले समेत छिमेकीको आन्तरिक मामिला भनेर अभिव्यक्ति राखेको छैन। लगभग कुटनीतिक साइनो शुन्य भएको भेनेजुएलाजस्ता राष्ट्रको सन्दर्भमा प्वाक्क बोल्ने क्षमता नेपालले देखाएको छैन, जबकी कैयन् नेपाली त्यहाँ अहिले छन्। कुटनीतिक सक्रियतामा अनपेक्षित मौनता हुनुले परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीरता नरहेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु समेत बेखबर छन्। पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघले जनमतको आधारमा मुद्दा सुल्झाउने सुझाव दिएपनि भारतको असहमतिका कारण मुद्दा सुल्झनुको सट्टा बल्झिँदै गएको छ।
पाकिस्तान अवसरवादी र विकल्प
कश्मीरमा भएको घटनालाई लिएर पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार मागिरहेको छ । तर प्रिन्स्ली स्टेटको यो अवस्था किन आयो त्यसमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । ३७० को धारा कटौती गर्दै भारतले यसलाई दुई युनियन टेरिटोरी बनाएको छ । कश्मीर अब भारतको आन्तरिक ममिला झैं बनको छ । यसमा आजात कश्मीरजसरी पाकिस्तानअन्तरगतको छ । कश्मीरी भ्यालीका जनताका लागि तीन बाटा छन् । त्यो हो( त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा जाने वा पुरानै अवस्थामा फर्कन आन्दोलन गर्ने वा नयाँ व्यवस्थाबाट अधिक फाइदा लिने । यो अर्थमा कश्मीरीहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
पाकिस्तानले उनीहरुका बारेमा बोल्न सक्छ , तर जनताले त्यहाँ कुनै आन्दोलन नगरे कोही कराएर केही हुने छैन।अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाकिस्तानले गरेको मागको पनि खास अर्थ राख्दैन।यतिखेर इमरान खानले चलाइरहँदा टर्की र मलेसियाले मात्र समर्थन गरेको देखिन्छ। पाकिस्तान आफैँ असहजतामा परेकाले पनि त्यसमा पाकिस्तानको धारणामा विदेशी पर्ने देखिँदैन। युएनको कुरामा दुवै मुलुक नगएको स्पष्ट छ। अनि यसमा विश्व व्यापारमा भारतको प्रभाव र अन्य विषयले पनि काम गर्ना हुनाले यसो भएको हो। पाकिस्तानले आफ्नो बारेमा सोच्ने हो , काश्मीरको विषयमा थप धारणा राख्दा त्यो बेअर्थको हुन्छ। त्यो काश्मीरको जनताले गर्ने विषय हो। यथार्थ , यस मामिलामा पााकिस्तानसँँग लचिलो हुनुको विकल्प छैन । जे गर्छ , काश्मीरी आफै गर्छन्।